Nọgidesiri ike n'ụlọ n'oge ọrịa COVID-19 ọrịa America na-aka nri
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Nọgidesiri ike n'ụlọ n'oge ọrịa COVID-19 ọrịa America na-aka nri
Na-agbasa News Travel • culinary • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Ndị America nyere iwu ka ha nọrọ n'ụlọ n'oge Covid-19 a na-amanye ndị na-efe efe achọ ụzọ ọhụrụ iji mezuo ibu ọrụ ha kwa ụbọchị ma were oge ha n'efu. A ọhụrụ ọmụmụ tọhapụrụ taa awade a ghọta na otú coronavirus nsogbu na-impacting okenye American na-azụ ahịa 'nri mmasị na omume, nakwa dị ka ikike ndị a ọhụrụ àgwà na-eme na-adịgide adịgide mgbanwe.
Maka ọmụmụ ihe a, e nyochara ndị okenye America 1,005 na ntanetị wee rịọ ka ha tụlee nri ha na-eri nri na iri nri ugbu a vs. tupu COVID-19, ma kesaa mgbanwe ga-esi na ntụkwasị obi na nri ha sie ike, ihe ndị e ji esi nri, ihe eji eme nri, nri nri, na ndị ọzọ.
Nchoputa di elu gunyere:
Na isi nri na ime ụlọ na ịrị elu, Obi ike na Kitchen na Ọ andụ na Isi Nri
Ọmụmụ ihe ahụ gosipụtara na ọnụ ọgụgụ ndị America na-esi nri ma na-esi nri ugbu a, ihe karịrị ọkara nke ndị na-azụ ahịa na-akọ na ha na-esi nri karịa (54%), ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ ndị na-emekwu ihe (46%). Ọ bụ ezie na iji nri ezigara akwụkwọ nri na ngwa nri (22%) na ịtụ ahịa maka nnyefe na nnyefe (30%) na-abawanye n'etiti ụfọdụ ndị na-azụ ahịa, nke a na-ewepụ site na mbelata omume ndị a (38% na 28%, karị ). Ngụkọta nke ụzọ atọ (75%) nke ndị okenye America niile na-esi nri karịa na-akọ na ha nwere ntụkwasị obi na kichin (50%) ma ọ bụ na-amụtakwu banyere isi nri ma malite ịmalite inwekwu ntụkwasị obi (26%). Ọ bụghị naanị ọrụ ụlọ, ngụkọta nke 73% na-anụ ụtọ ya karịa (35%) ma ọ bụ karịa ka ha mere tupu (38%).
Ndi America Buru More Adventurous na Creative na Kitchen
Ọtụtụ n’ime ndị ahụ nyochara achọpụtala ihe ọhụụ (38%) na akara ọhụụ (45%) ma na-achọpụtakwa ihe ndị ha na-ejighi n’ime ogologo oge (24%). Ka ọ dị ugbu a, ndị na-eri nri kwuru na ha na-esi nri karịa mgbe ụfọdụ na-anakwere omume ọhụrụ ndị a karịa ịnụ ọkụ n'obi (44%, 50% and 28%, karị) Ihe okike juputara, ihe dika otu ụzọ n'ụzọ atọ (34%) nke ndị okenye niile na-achọkwu ntụziaka na nri nri (31%). Ntụziaka kachasị elu ndị ahịa na-achọ dị mfe, ngwọta nri bara uru (61%) na ụzọ isi jiri ihe ndị dị ugbu a (60%), ọ bụ ezie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ndị na-azụ ahịa na-achọkwa ụzọ ha ga-esi sie ike (47%) na mmụọ iji nwaa ọhụụ nri (45%). Ihe kariri otu ụzọ n'ụzọ atọ (35%) nke ndị ọrụ nhazi na-achọ ọrụ nri na mmụọ nsọ iji mụta usoro ọhụụ.
Ezinaụlọ na-eri nri na-erughị nri site n'enyemaka site na ntụziaka eji eme ihe eji eme ihe
Mmụta ahụ chọpụtara na 57% nke ndị America na-emebi nri pere mpe karịa tupu nsogbu coronavirus, na 60% nke ndị okenye niile gbara akwụkwọ na-ekwu na ha na-achọ ntụziaka iji jiri ihe ha nwere n'aka ha n'ụlọ nri ma ọ bụ friji. Ebee ka ha na-achọta usoro nri ndị a? Isi mmalite dị iche iche gụnyere weebụsaịtị (66%), mgbasa ozi mmekọrịta (58%), na ezinụlọ na ndị enyi (52%), na Facebook na-eduga mkpọ ahụ dịka usoro ntanetị kachasị maka usoro isi nri, maka mmadụ niile mana Gen Z.
Akụkọ nke Waistlines? Ndị America Kewapụrụ na iri nri ahụike karịa ma na-eri nri ndị ọzọ na-atọ ụtọ na nkasi obi
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ndị America yiri nke ahụ na-akọ na ha na-eri nri ahụike (39%) dịka ndị na-atụgharịkwu obi na nri nkasi obi (40%). Ihe ọcoụholụ mmanya na-aba n'anya na-adịtụ otu, yana akụkụ nha nke ndị na-a consumersụ mmanya na mmanya / biya / mmụọ (29%) dị ka ị drinkingụ obere (25%), ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-ejidekwa (46%) na-a drinkingụ otu ego dị ka ha dị tupu nsogbu coronavirus. Ndị na-a drinkingụkwu profaịlụ na 25-34 (33%) na ezinụlọ ndị nwere ego karịa (38% na HH nwere ego nke $ 100K). Ka ọ dị ugbu a, ịracha nri n'ụbọchị niile dị n'oge niile, ọkachasị na ezinụlọ nwere ụmụaka, ọkara (50%) na-akọ na ha na-eri nri karịa ka ọ dị na mbụ.
The New Normal: Usoro Nri Na-emetụta Ogologo Oge
N'ụzọ dị oke mkpa, n'etiti ndị America na-esi nri karịa, ihe karịrị ọkara (51%) kwuru na ha ga-aga n'ihu mgbe nsogbu coronavirus bịara na njedebe. Ndị na-akpali akpali gụnyere: isi nri n'ụlọ na-echekwa ego (58%), isi nri na-enyere ha aka iri nri (52%), na-anwale usoro ọhụrụ (50%), ha na-ahụkwa nri na-ezu ike (50%).
Nsonaazụ ọmụmụ ahụ gosipụtara na mgbe ọ na-esiri ike, ndị America, bụ ndị e lere anya dị ka ndị nwere nchekwube zuru oke, chọta ụzọ ha ga-esi merie na nke a, ha na-ahọrọ ibugharị ike ha na imepụta ihe na kichin, ọ bụghị naanị ịchọta ọ findingụ na usoro esi nri, kamakwa na uru ndị sitere na ya.